Mety Hisamborana Anao Ny Fanatontosana Lahatsary Youtube Hanohanana Ny Ekipam-pirenena Ao Iran · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jolay 2014 4:30 GMT
Iray volana monja taorian'ny nampidirana am-ponja ireo Iraniana enina noho ny fanatontosana lahatsary malaza “Happy”, olona telo indray no nosamborina tao Iran noho ny fandraisan'izy ireo anjara tamina lahatsary mozika misy feon-kira manohana ny ekipam-pirenena Iraniana tamin'ny Mondialy.
Ahitana horonantsary Iraniana avy amin'ireo firenena maherin'ny roa ambin'ny folo mihira sy mandihy ilay lahatsarynovokarin'iAjam Band monina ao amin'ny Fanjakana Britanika. Mpilalao horonantsary roa sy mpanatontosa sarimihetsika no nosamborina, araka ny filazan'ny sampam-pahalalam-baovaom-panjakana Iraniana. Tsy ampy ny fanazavana mahatonga ny nisamborana azy ireo, saingy nolazain'ireo polisy Iraniana ho “foza” ilay lahatsary .
Nihintsana tamin'ny Mondialy i Iran rehefa resin'i Bosnia-Herzegovina 3-1 tamin'ny 25 Jiona.
Nitarika avy hatrany ireo Iraniana hidina an-dalambe hankalaza ny faharesena teo anoloan'i Arzantina tamin'ny fifaninanana. Tsy navelan'i Iran nampiditra baolina i Arzantina tao anatin'ny 90 minitra nandritra ny lalao tamin'ny 21 Jiona mandrapampidiran'ilay “superstar” Lionel Messi baolina tamin'ny minitra farany. Hoan'ireo Iraniana marobe, zava-bita mahatalanjona hoan'ny ekipam-pireneny izany.
Amir Jahnashai, mpanorina ny fahilavitra Iraniana mpanohitra “Raha TV” ao London, nisioka hoe:
Bilaogera Namajafari nampiditra zava-misy tsy mahafaly kely tamin'ny fankalazana: